Mashruuc lagu xoojinayo caafimaadka Puntland oo Garoowe lagu daahfuray | Puntland Ministry of Health
Mashruuc lagu xoojinayo caafimaadka Puntland oo Garoowe lagu daahfuray
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdullahi Cumar ayaa maanta oo Arbaca ah magaalada Garoowe ku Daah-furay mashruuc loogu magacdaray xoojinta caafimaadka Puntland ee 2017-2019, waxaana mashruucan maalgeliyey Bangiga horrumarinta Jamarlka<.
Furitaanka Mashruucan waxaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku wehelinaayey masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dowladda Puntland, wefti uu hogaaminayo safiir ku-xigeenka dalka Jarmalka u fadhiga Soomaaliya Mr. Markus Bollmohr iyo hay’addaha hawl-waddeenka la ah Wasaaradda Caafimaadka Puntland iyo hay’addo kale oo caalami ah.
Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cumar Camey oo kahadlay daahfurka mashuucan xoojinta caafimaadka ayaa sheegay in mashruucani yahay mid wax weyn ka taridoona hawlaha horumarrineed ee caafimaadka Puntland, waxaana uu Madaxweyne ku-xigeenku sheegay in mashruucani isugu jiro hawlo caafimaad iyo dhismayaal xarumo caafimaad oo laga hirgelinayo labada gobol ee Mudug iyo Nugaal. Mashruucan ayaa la sheegay in dib u habayn iyo dayactir lagu samayn doono 20 Xarumaha Daryeelka Caafimaadka Hooyada (MCH) iyo daboolidda hawlaha caafimaad ee aasaasiga ah ee labada gobol ee Nugaal iyo Mudug.
Ergayga ka socdey Safaaradda Jarmalka ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa’ideysanayaan dad ka badan 2.2 milyan oo Soomaali ah, isla markaana uu kor u qaadayo caafimaadka Hooyada iyo dhalaanka iyo weliba nafaqeynta dadka u baahan. Mashaariicdan ayaa u qaybsan labo, waxaana mid kamid ah hay’adda GIZ u wakiilatey fulintiisa hay’adda daryeelka hooyada iyo dhalaanka ee UNICEF.